Yimuphi i-generator yegama elingukhiye le-Amazon okufanele nginakho ngokuhlelwa kokufakwa komkhiqizo wami?
Ngaphambi kokuba siqhubeke ngokukhetha i-generator yegama elingukhiye le-Amazon elifanele ukuze ukwandise uhlu lwakho lomkhiqizo ngendlela engcono kakhulu, ake siqale ngokufunda okuncane. Okokuqala, ake sibhekane nakho - uma ufuna ukubeka isisindo somkhiqizo e-Amazon ngokomzimba, kuzodingeka uguqule ikhasi lakho lomkhiqizo libe elikhangayo kakhulu, okuyi-A9 yokusesha i-algorithm. Ngakho-ke, injini enkulu yokusesha i-Google ne-Amazon isebenzisa amamethrikhi ahlukene kakhulu ukuze kunqume ukuthi umphumela othile wokusesha ufanelwe kahle. Nansi indlela okusebenza ngayo ngayinye yazo:
1. i-Amazon isebenzisa ukuguqulwa ukucacisa ukuthi izivakashi zakho zekhasi lomkhiqizo zishintsha kanjani kubathengi bangempela abakhokhayo - server vps cheap.
2. I-Google ibheka ngokuyinhloko isikhathi sokuvakasha ngomsebenzisi, kuhlanganiswe nesilinganiselo sokuchofoza okulinganiselwe.
Ngokucabangela ukungezwani okukhulunywe ngenhla, yisikhathi sokusebenza ngempumelelo amagama akho angukhiye okubhekiswe kuwo ngaphezulu. Futhi ngezansi ngizokukhombisa amathuluzi amakhiyagakhi angukhiye wekhibhodi ye-Amazon enhle kakhulu ukuze uhlu lwakho lomkhiqizo lube luhle kahle. Ekugcineni, ukuzibona phakathi kwemiphumela ephezulu yokusesha kulokho okungaphezu kwezimakethe ezigcwele. Ukuze usebenze ngempela ngamagama akho angukhiye oyinhloko, cabanga ngezici ezilandelayo kanye neziphakamiso ezisebenzayo:
1. Cabanga ngaphandle kwebhokisi. Ngisho ukuthi ungathola igama elingukhiye elinokuwina noma inhlanganisela yokusesha yomkhiqizo omude - zonke izindlela zokudubula bukhoma zingase zibheke lo mkhiqizo ngokudayiswa.
2. Ungalokothi unganqikaze ukuzama i-thesaurus ukuthola ezinye izinkulumo ezifanayo noma okumele uzuze izinkulumo zokusesha ze-LSI mhlawumbe esebenzisa abasebenzisi bethenga e-Amazon.
3. Dlulela ngokujulile usebenzisa i-Amazon engukhiye wekhiyekhi ye-generator namathuluzi okusikisela, njenge-MerchantWords noma umhloli wegama elingukhiye - futhi usuqedile.
Le generator yegama elingukhiye le-Amazon elilinganiselwe kanye nesikhulumi sokucwaninga singakusiza ukuba uthuthukise imishwana yokusesha yomkhiqizo omude onobude obunembile.Ekugcineni, ukwandisa ukuthengiswa kwenetha yakho jikelele ngaphezulu. I-MerchantWords ibheja ngokuyinhloko kwi-database eyinhloko yegama elingukhiye elihlanganisa amagama angukhiye angaphezu kwezigidi ezingu-170 kanye nezinhlanganisela zosesho eziphezulu ezisetshenziselwa abathengi abaphilayo abafuna imikhiqizo edayiswayo.
Okungaphezulu - leli thuluzi le-generator yegama elingukhiye le-Amazon (ipulatifomu le-intanethi, ukuze liqonde ngokuqondile) lingaba yisisombululo esihle, ikakhulukazi abathengisi abasesikhathini esingabazi kakhulu I-Engine Optimization (SEO).
I-KeywordInspector iyinhlangano enkulu ye-generator ye-Amazon eyinhloko ye-keyword engakunikeza ukusikisela okuwusizo ngempela ukuze uhlale ukhuphisana, ngisho nangaphansi komncintiswano omkhulu wemakethe wezinga lokuhlunga ngempela. Into engalungile kuphela ngaleli yesikhulumi se-intanethi ukuthi imali yakhe yanyangazonke yamabhange angu-40 ingaba imali eningi kakhulu osomabhizinisi abasha abathengisa e-Amazon. Noma kunjalo, ngikholelwa ukuthi leli thuluzi lifanele ukuzama ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Ngokuyinhloko ngenxa yokukhetha okukhethwa kukho okubaluleke kakhulu okukhishwayo kwegama eliyisipesheli, okungakusiza uhlale uvuselelwe ngokuhlola yonke inhlanganisela yegama eliyinhloko eliyinhloko ngesonto noma nsuku zonke.